खोला खुम्चिदै, पक्की घर बन्दै | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / खोला खुम्चिदै, पक्की घर बन्दै
खोला खुम्चिदै, पक्की घर बन्दै
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड February 14, 2019	0 55 Views
उदारण नं. १
बजार क्षेत्र हु“दै लोटहीसोता दक्षिणतर्फ बगेको छ। यो सोताबाट पानी राम्रोस“ग निकास हु“दैन। वर्षामा पानी फुलिएर बजारतर्फ बाढी पस् छ। लोटही सोता थुनिनेगरी संरचना बनाइएका छन्। घरको पिलर खोलाभित्र हालिएको छ। पर्खाल लगाउ“दा खोलाको भाग मिचिएको छ। जसले गर्दा सोताको भाग खुम्चिन पुग्यो। कक्षपति राइस मिलको पर्खाल खोलाको डिलबाटै उठाइएको छ। लोटही सोताको क्षेत्र तल्लो क्षेत्रबाटै खुम्चिदै माथितिर आएको छ।
उदारहण नं. २
राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फको सुनखोली खोलाको भाग मिचिने गरी घर बनाइएको छ। बि एण्ड बि होटल एण्ड लज रहेको घर बनाउ“दा खोलाबाटै जग हालिएको छ। यो घरदेखि मुन्तिर बनेका पक्की संरचनाले खोलाको भाग मिचिएको छ। सोताको भाग मिचिने गरी संरचना बन्दा समेत कसैको ध्यान पुगेको छैन।
लमही अस् पतालको पछाडिबाट लमही सोता बगेको छ। चुरे हुदै दक्षिणतर्फ बगेको यो सोता पनि अतिक्रमणको चपेटामा छ। घर र पक्की पर्खालले खोलालाई थिचेको छ। खोलामाथि बिम बा“धेर संरचना बनाउने प्रयास गरिएको छ।
अर्नहवा खोलाको भागलाई तारबार गरेर व्यक्तिले चर्चिएका छन्। सगै खोलाको डिलबाट घर बनाएका छन्। यसरी अर्नहवाखोला तलसम्म पुग्दा खुम्चिएको छ। लमही बजार क्षेत्रभित्र तीनवटा खोला पर्छन्। जुन खोला उत्तर तर्फको चुरे हु“दै दक्षिणतर्फ बगेका छन्। अर्नहवाखोला, लमही, लोटही र सुनखोली सोताको राजमार्गदेखि दक्षिण तर्फको क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। खोलाको क्षेत्र खुम्च्याएर पक्की संरचना बनाउने, घर बनाउने जस् ता कार्य भइरह“दा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन। ‘पानीको निकास थुनिने गरी तलबाटै अतिक्रमण हुदै आएको छ।
कसले अनुगमन गर्ने, कसले हेर्ने यस् ता विषय’– स् थानीयले भने– ‘पानीको निकास थुन्ने गरी संरचना बनाइनुहु“दैन। यसले बजारलाई दीर्घकालीन असर गर्छ।’ खोला अतिक्रमण गरेर पक्की संरचना बनाउने क्रम बढेको छ। खोलाको भागबाट जग उठाउने र पक्की घर बनाउने क्रम बढेको पाइएको हो।
पहाड ताछेर टहरा
लमही अस्पताल प्रवेश गर्ने सडकको उत्तर तर्फको किनारमा सामुदायिक वनको पहाड ताछेर टहरा निर्माण गरिएको छ। दिनप्रतिदिन वन क्षेत्रको जग्गाको माटो हटाउ“दै टहरा बनाउने कार्य बढ्दै गएको छ। पारिजात महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रभित्र पर्ने भू–भाग हो। तर, अहिले सामुदायिक वन नवीकरण छैन। जसले गर्दा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ।
Previous: लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई रेफरल सेन्टरको रुपमा विकास गरिने
Next: सेवारखोलाको हरितपार्क जोगाउन हारगुहार